Shangu dzinotarisira nharaunda | Green Renewables
Shangu dzine hanya nenharaunda
Adriana | | Imba yeGreen, Environment
Zvishoma nezvishoma, zvishoma uye zvakawanda mabhurani uye mabhizinesi anogadzira organic zvigadzirwa.
Chiratidzo cheFrance FYE (Yako Eart) zvinoreva kuti chiSpanish "chenyika yako" yatanga shangu dzecological neshangu.
Ichi chishandiso chinongoshandisa chete ecological zvinhu uye zvigadzirwa mukugadzira kwayo mukuwedzera pakuve inowora.
Pakati pezvinhu, iyo dzokorora s PET zvaunowana kubva mumabhodhoro epurasitiki, organic donje yematareti uye linings. Kuti vape shangu idzi vara ravo vanoshandisa pigments uye ecction tinctures pasina kusvibisa kana zvigadzirwa zvine chepfu zvinoenderana nemvura saka ndizvo zvazviriwo Biodegradable.
FYE inogadzirawo epamusoro mhando shangu uye shangu mamodheru ane yakaderera nharaunda kukanganisa.
Ichi chimwe chigadzirwa chinoshandisa kutengeserana kwakasimba uye kunoripa kwayo CO2 chisi kushanda pamwe nechirongwa che masango emasango muIndonesia pakati pezviito zvakatipoteredza uye zvemagariro.
FYE muenzaniso wekambani inoona nezvehukama uye yakazvipira munharaunda, kunyanya muchikamu chakadai seshangu. Sezvo paine makambani makuru anogadzira shangu dzemitambo uye mamwe marudzi eshangu anoita mashoma maitiro ane basa uye anogadzira makuru kukanganiswa kwemamiriro okunze asi vanoshandisawo vashandi.
Izvo zvakakosha kuti makambani anetseke nezvekugadzira zvigadzirwa zvisingakuvadze nharaunda uye zvakare zvinoshanda mukuvandudza hupenyu hwehupenyu hwepanyika.
Isu sevatengi tinofanira kutsigira rudzi urwu rwechigadzirwa kuratidza kuti isu tinofarirawo chengetedza zvakatipoteredza, kutenga zvigadzirwa zve organic.
Kuzvipira kwezvakatipoteredza kunofanirwa kuve kwemunhu wese uye nzira yakapusa yekubatsira kushandura mashandisiro emashandiro evamwe anowanda munharaunda uye nharaunda.
Kana iri patinokwanisa kusvika, zviri nyore kuti isu tisarudze zvakasikwa, zvishandiswazve, zvigadzirwa zvinogadziriswa zvigadzirwa zvinotarisira nharaunda.
Izvo zvinokwanisika kufamba neecological shangu uye nenzira iyi iyo tsoka yako pasi pano ishoma.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Green Renewables » Simba rekuchengetedza » Imba yeGreen » Shangu dzine hanya nenharaunda
Kukosha kwemiti kupinza
Green chirangaridzo chekurangarira vakaurayiwa ve9 / 11 muNew York